ဗီလာနဲ့ပွဲက မန်စီးတီးရဲ့ ပထမသွင်းဂိုးဟာ လူကျွံနေကြောင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ အက်ဖ်အေ – MyMedia Myanmar
ဗီလာနဲ့ပွဲက မန်စီးတီးရဲ့ ပထမသွင်းဂိုးဟာ လူကျွံနေကြောင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ အက်ဖ်အေ
အင်္ဂလန် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဖြစ်တဲ့ အက်ဖ်အေ ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် အတွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဗီလာအသင်းနဲ့ မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်မှာ သူတို့ရဲ့ ဒိုင်လူကြီးတွေဟာ မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းရဲ့ အဖွင့်ဂိုးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မှားယွင်းစွာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံသွားကာ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူကျွံဘော စည်းမျဉ်းတွေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင် သွားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ပွဲစဉ်မှာ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗားဟာ မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်း အတွက် ဦးဆောင်ဂိုးကို ပွဲကစားချိန် ၇၉မိနစ်မှာ သွင်းယူ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သွင်းဂိုးမှာ မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ရိုဒရီဟာ လူကျွံအနေအထားမှာ ရှိနေရာ ကနေ ဗီလာအသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ တိုင်ရွန်မင်းစ်ရဲ့ ခြေထောက်ထဲက ဘောလုံးကို ကြားဖြတ် လုယူကာ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗားရဲ့ သွင်းဂိုးကို ဖန်တီးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ သွင်းဂိုးကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာကြောင့် အက်စ်တွန်ဗီလာ အသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ ဒိန်းစမစ်ဟာ စတုတ္ထ ကွင်းလယ်ဒိုင်ကို အပြင်းအထန် စောဒက တက်ခဲ့ပြီး ကွင်းလယ်ဒိုင် ဂျွန်မော့စ် ကတော့ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကြောင့် စမစ်ကို အနီကတ် ပြသကာ ပွဲအတွင်းကနေ ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ သွင်းဂိုးဟာ လူကျွံဘော ဖြစ်တယ် ၊ လူကျွံဘော မဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ အငြင်းပွားမှုဟာလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံး ရပ်ဝန်းမှာ အတော်လေး ဂယက်ရိုက်ခဲ့ပြီး အများစု ကတော့ ဒါဟာ ဂျွန်မော့စ် ဦးဆောင်တဲ့ ဒိုင်လူကြီး အဖွဲ့ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဒီသွင်းဂိုးမှာ ရိုဒရီဟာ လူကျွံနေကြောင်း ယုံကြည်ကြပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အက်ဖ်အေဟာ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး IFAB ၊ UEFA တို့က ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ပြန်လည် ချိန်ညှိ စဉ်းစားမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောင်တစ်ချိန်မှာ ရိုဒရီရဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုး ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဒါဟာ လူကျွံဘော ဖြစ်ကြောင်း စည်းမျဉ်းအသစ် တစ်ခုကို ထုတ်ကာ သူတို့တွေရဲ့ အမှားကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
အက်ဖ်အေက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ လူကျွံဘော စည်းမျဉ်းအသစ် မှာတော့ “ ကစားသမား တစ်ယောက်ဟာ လူကျွံ အနေအထား တစ်ရပ်မှာ ရှိနေပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို ဘောလုံးကိုင် ထားတဲ့ တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ ကစားသမား တစ်ယောက်ဆီက ဘောလုံးကို လုယူဖို့ ကြိုးစားရင် ဒါဟာ လူကျွံအနေအထားကို အသုံးချပြီး တစ်ဖက်အသင်းကို အသာစီးရအောင် ကြိုးစားခွင့် မပြုဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ငြိစွန်းနေတာကြောင့် လူကျွံဘော အဖြစ် သတ်မှတ်ရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောင်တစ်ချိန်မှာ ရိုဒရီက တိုင်ရွန်မင်းစ်ကို ဖိအားပေးပြီး ဘောလုံးကို လုယူခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်လာပါက ဒါကို လူကျွံဘော အဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာပါ” ဆိုပြီး ပါဝင် လာပါတယ်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးကရော စည်းမျဉ်းအသစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လို မြင်ကြလဲဗျ…?
The post ဗီလာနဲ့ပွဲက မန်စီးတီးရဲ့ ပထမသွင်းဂိုးဟာ လူကျွံနေကြောင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ အက်ဖ်အေ appeared first on MySport Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-27T12:00:36+06:30January 27th, 2021|MYSPORT MYANMAR|